Somali - 01. Conversation - Booklet 2: Ma aha Muslim kasta oo rumeeya oo u maleeyoIsku mid | Grace and Truth
Home -- Somali -- 01. Conversation -- 2 Muslims Differ
2 - MA AHA MUSLIM KASTA OO RUMEEYA OO U MALEEYOISKU MID!
Markii lala xiriiro dadka muslimiinta ah waxaa muhiim ah in laga feejignaado xaqiiqada ah in muslimiintu si weyn iskugu kala duwanaadaan. Dulmar guud oo ku saabsan noocyada muhiimka ah ee muslimiinta ee aad la kulanto waxay kaa caawineysaa inaad diyaar u ahaato inaad wax ka qabato qofka saxda ah waqtiga saxda ah.
2.04 -- Muhammad iyo "Dadka ka mid ah buugga"
2.05 -- Saameynta kiniisadda Ortodokoos ee dhismaha Islaamka Kaniisadaha
2.06 -- Muhammad iyo khilaafaadka u dhexeeya Yuhuudda iyo Masiixiyiinta
2.07 -- Kaniisadda Ortodoksiga - silsilad dheer oo silic ah
2.08 -- Islaamka iyo Kaniisada Katooliga Romanka
2.09 -- Islaamka iyo kaniisadaha Protestant
2.10 -- Kala qaybinta kaniisadaha iyo qaybta Islaamka
2.11 -- Sunniyiinta - qulqulka ugu weyn ee Islaamka
2.12 -- Shiitiyada - ugu horeeya diinta Islaamka
2.13 -- Muujintii saddexaad ee Islaamka
2.14 -- Waa maxay noocyada Muslimiinta ee aan la kulanno?
2.14.1 -- Muwaadiniinta Islaamku-diinta Islaamka ah
2.14.2 -- Muslimiinta Liberalka ah
2.14.3 -- Haweenka Muslimiinta ah
2.14.4 -- Dhalinyarada Muslimka ah
2.14.5 -- Muslimiinta niyadjabsan
2.14.6 -- Islaamiyiinta Muslimiinta ah
2.14.7 -- Mucjisooyinka Islaamka
2.14.8 -- Bixiyeyaasha Islaamka
2.15 -- Si sheeko dheer loo dhigo
2.16 -- Baaris
2.01 -- Ma aha Muslim kasta oo rumeeya oo u maleeyoIsku mid!
2.02 -- Horumar taariikhi ah iyo xaqiiqooyinka la taaban karo
Qofkasta oo doonaya inuu fahmo fikradaha muslinka waa in uu ka warqabaa horumarka taariikhiga ah ee degaanka Yahuuda iyo kaniisadaha Masiixiga ee Jasiiradda Carabta iyo dalalka Mediterraneanka. Islaamku ma uusan soo bixin calaamad buluug ah, laakiin wuxuu ka soo kordhay xiriirka lala yeesho dhaqanka, Yuhuudda iyo Masiixiyiinta.
2.03 -- Yuhuudda iyo Masiixiyiinta wakhtiyada ka hor Muxammad
Yuhuuddu waxay ku kala firdheen dhinac kastoo ay qabteen ciidamadii Roomaanka ee ku sugnaa Greater Suuriya ama lagu iibiyay addoonsi ka dib markii ay cagajuglaynayeen (70 A.D. 132/135 A.D.). Gumeysiga Yuhuudda waxaa lagu aasaasay Aasiyada Yar, Ciraaq, Jasiiradda Carabta, Masar iyo Rooma laftiisa.
In hirarka joogtada ah ee dagaallada u dhexeeya dawladaha Mediterranean iyo xooggooda ka soo baxaya Aasiya, ayaa Yuhuudda ku nool bariga reer Suuriya ee la dagaallanka dhinaca Sassanids ee ka soo horjeeda Roomaanka. Iyada oo gacan ka heleysa asxaabtooda waxay aasaaseen Boqortooyada Yuhuudda ee Koonfurta Yemen, halkaas oo malaariyada iyo qunyar-socodka ay u koraan, iyagoo ka soo horjeeda saameynta diinta Kirishtanka ee Byzantine.
Ka dib markii Roomaaniyiintu ay burburiyeen Yuhuudda kacdoonkii Yuhuudda iyo Dimishaq, kaniisadaha Masiixiyiintu waxay ku urursanayeen magaalooyinka Alexandria, Antioch, Efes, Rome, Edessa iyo ka dib Constantinople. Waxay ku wacdiyeen Mesopotamiya, Itoobiya, Waqooyiga Afrika iyo Bartamaha Aasiya. Kootada Itoobiyaanka ah waxay bilaabeen in ay ka dhex muuqdaan waqooyiga Yaman waxayna dhiseen boqortooyo masiixiyiin ah muddo tobanaan sano ah iyada oo ay ku jiraan wadi nadjran. Dagaal aad u qaraar ayaa ka dhex qarxay boqortooyada Yuhuudda ee koonfurta Yemen iyo boqortooyadii Coptic ee woqooyiga Yemen. Kiristayaasha Masiixiyiinta ah ee Suuriya ayaa sidoo kale laga iibsaday Hedjaz. Guri-kaniisad ku taal Makka ayaa soo uruurisey Waraqa b. Nawfal. Waqtigan xilka hoggaamiyaha kiniisaddu ee magaalada Sohat, ee Sultanate of Oman, wuxuu ahaa kaqaybgalaha Golaha Nicea.
Muxammad (575-632 AD) ayaa Yuhuuddii iyo Kiristaanka u riyaaqay, sababtoo ah waxay haysteen buug ay u muujiyeen qarsoodiga hore, dib u abuurista, iyo amarkooda nolol maalmeedkooda iyaga oo u hoggaansamey sharciyo oo ay u soo bandhigeen maalin kasta Xukunka. Muhammad sharfay Yuhuudda iyo Masiixiyiinta iyo iyaga u yeedhay "Dadka ka mid ah buugga". Waxa uu ku rajo weynyahay in uu heysto buug sida sidiisa oo kale ah ee luqada Carabiga. Waxa uu isku dayay inuu ururiyo macluumaad badan oo kitaabi ah intii suurta gal ah oo uu rajeynayey inuu horumariyo diintiisa.
Muxammad wuxuu ku riyaaqay Ibraahim, Baaddoin, oo doonayay inuu wiilkiisa kaliya u bixiyo inuu allabari u bixiyo Allah (Sura al-Saffat 37:99-113). Sababtoo ah, Quraanka wuxuu ugu yeeraa Abrahamham Muslimka ugu horreeya (Sura Al 'Imran 3:67). Muuse, hoggaamiye siyaasadeed iyo dhexdhexaadiyaha u dhaxeeya Allah iyo dadkiisa axdiga, ayaa lagu xusay 136 jeer Quraanka. Waxa uu tusaale u ahaa Muxammad iyo dadka raacsan sababta oo ah wuxuu ku midoobey diinta iyo awoodda, diinta iyo gobolka qofka.
Sheekooyinka ku saabsan aabbayaasha rumaysadka iyo Sulaymaan iyo sidoo kale amarro kala duwan oo ka yimid Sharciga Muuse waxay buuxiyeen 10 jeer Quraanka Quraanka kariimka ah sida warbixinno ku saabsan wiilka salaada ah ee Maryan, bogsiiyaha mucjisada ah iyo kuwa raacsan. Qof kasta oo akhriya Quraanka waxaa laga yaabaa inuu si dhakhso ah ama dambe u dareemo in uu yahay diinta Islaamka sida diinta Yuhuudda, kaas oo si diidmo ah u diidey Muslimiinta.
Orthodox ayaa saameyn xooggan ku yeeshay Islaamka kaniisada Katooliga Romanka. Si kastaba ha ahaatee, Ortodoks Chris Chris ayaa ma gudbin wax baris dhamaystiran oo ku saabsan Masiixa Muxammad. Inkasta oo Copts ay xooga saarteen ilaahnimada Ciise sida uu dhigayo dugsigooda Alexandria, Masiixiyiintu waxay raaceen dugsigii Antiyokhene oo ku saabsan dabiicadda Masiixa.
Qaababka cibaadada ee diinta Islaamka ah ayaa lagu soo celin karaa adeega Orthodoxka kuwaas oo rumaystayaashu u sujuudaan inta lagu jiro usbuuca ka hor inta aan Easter loo sharxin Quduusnimada Quduuska ah. Ereyga qiraan ee Carbinta Orthodoxka Carabiga waxaa loola jeedaa: akhrinta injiilka inta lagu jiro qaybta quduuska ah. Eraygani waa suurtogalnimada asalka ereyga Qur'aanka oo aan aheyn mid kale. Axdiga Kitaabka Qudduuska ah ereyga badbaadada waa furqan, oo Quraanka kariimka ah u muuqda sida fariin adag.
Muxammad wuxuu ka warqabay muranka kulul iyo doodaha u dhexeeya Yuhuudda iyo Masiixiyiinta (Sura al-Baqara 2:113 iwm). Waxaa jiray dagaallo xoogan oo u dhexeeya boqortooyooyinka Yuhuudda iyo Masiixiyiinta ee koonfurta iyo waqooyiga Yemen muddo dhawr sano ah oo ay koox walba ku dhibaateesatay ka dib markii ay ku guuleysteen olole dagaal. Muhammad wuxuu fahamsanaa qaybtan sida go'aanka Alle, oo kiciyey dhinacyada dagaallamaya midba midka kale ee Hedjaz, sidaa darteed Islaamku si guul leh ayuu ugu faafi karaa cadowgaas, wiiqay dagaaladii. Muxammad wuxuu u muuqday sida daawadayaal udhexeeya dadka kale, laakiin ka dib wuxuu ku guuleystay dhammaantood.
Yuhuuddu waxay diideen Muxammad sida nebi ah, waxay qaylinayeen qaladaadkiisa Qur'aanka, waxayna ku qosleen si cad. Sidaas ayuu habaar ugu dhigay toban jeer (Sura al-Baqara 2:65-66; al-Ma'ida 5:60; al-Araf 7:163-166 iwm). Wuxuu ugu yeeray cadowga ugu caansan ee Islaamka (Sura al-Ma'ida 5:82). Wuxuu ku khasbay qabiilooyinka Yuhuudda ee hodanka ah inay hijroodaan iyo waqti go'an, ayuu ku riday ama u tirtiray seef.
Bilowgii Kiristaanka ee Jasiiradda Carabta waxaa loo tixgeliyey inuu yahay saaxiibka ugu da'da yar ee Muslimka (Sura al-Ma'ida 5:82). Laakiin markii ay sii wadeen inay qiraan Ciise sida Wiilka Ilaah waxay ku habaareen sida Yuhuudda (Sura al-Tawba 9:29). Dhawr sano ka dib waxay hore uga soo jeeda Jasiiradda Carabta ee Caliph Omar Ibn al-Kattab.
Ololihii guuleystay (632-732 A.D.) Ciidamada Muslimiinta waxay ku guuleysteen xarumaha muhiimka ah ee asalka ah ee Masiixiga: Jerusama, Alexandria iyo Antioch. Kuwaas waxaa soo raacay Constantinople iyo Efesos oo ah mawjada labaad ee diinta Islaamka. Inta badan Masiixiyiinta ah ee Galbeedka ayaa illowday, la iska indho tiray ama aamusnaanta aqbalay masiibadan weyn ee kaniisadkiisa.
Kaniisadaha Ortodoksiga waxaa badanaa lagu tijaabiyay dhibaatada. Waxaa la xakumay, silcin jiray oo si joogta ah u diidey Islaamka muddo 1,370 sano ah. Inta lagu guda jiray waqtigii Muhammad, badi dadka deggan koonfur-bari iyo waqooyi-bari ee ku yaalla badda Mediterranean waxay ahaayeen Masiixiyiin Ortodos ah, laakiin Islam ayaa 90% ka mid ah canshuurihii burburay, ka soo horjeeda iyo hoos-u-dhigidda, u beddelay Muslimiinta. Kaliya boqolkiiba 10 boqolkiiba waxay aaminsan yihiin Ciise xitaa haddii ay noqoto in la tixgeliyo muwaadiniinta heerka labaad ah! Muslimiintu waxay inta badan ka faa'iidaystaan qowmiyadan addeeca ah ee hoggaanka. Waxay marnaba khatar dhab ah ama khatar ku ah Islaamka. Laga soo bilaabo dabeecadooda Muslimiinta waxay tixgeliyeen masiixiyiin in ay noqdaan kuwo daacad ah oo is-hoosaysiiya, kuwaas oo si fudud loo kicin karo.
Cibaadada awoodda leh ee Quduuska Quduuska ah ee Kaniisada Orthodox iyo nidaamka hanti-dhisida ayaa ka caawiyay sidii loo noolaan lahaa. Dalalka aan Islaamka ahayn waxay badanaa u gudbiyaan maamulka xukummada, laakiin mabaadiideedii waxay ku celcelin jireen doorka diinta gobolka (Byzantium, Ruushka, Giriigga, Serbiya iyo wixii la mid ah). Muslimiinta waddankoodu waxay ku qasbeen kiniisiyeyaasha Orthodox iyo wadaadada in ay ururiyaan canshuurta laga tirada badan yahay ee ay ka soo jeedaan qowmiyadaha Chrisland ee hoggaamiyayaasha Muslimiinta. In magdhowgu ay awood u yeesheen awood fulin oo xaddidan kaniisadaha kaniisadaha. Kaniisadaha Orthodoxka ah ee haysta 250 malyan oo xubnood ayaa maanta ka kooban 14 boqolkiiba Masiixiyiinta adduunka.
Kaniisada Katooliga Romanka, inkastoo ay kala duwan tahay, ayaa waxaa ka soo horjeeda dadka Muslimiinta ah inay noqdaan kaniisad dagaal. Waxay u muuqataa in ay noqon karaan awood diimeed-siyaasadeed oo caalami ah xitaa ka dib markii uu hoos u dhacay Boqortooyada Roomaanka galbeedka iyo khalkhalka dib-u-celinta ee Europe.
Ciidammada Katooliga ah ee Charles Martell ayaa cambaareeyay weerarkii ugu horreeyay ee Muslimiinta ku yaala Tours, meel u dhow Paris, France (A.D. 732). Xadgudubka Katoolikada ayaa si la mid ah u wiiqay kaniisadda Ortho¬dox ee ay ku qabsadeen Constantinople (AD 1204) illaa xadka diiniga ah ee diinta kiristaanka ah ee ka soo horjeeda diinta Islaamku ay ku dhacday gacmaha Muslimiinta 1453. Muddo gaaban ka dib markii 1529 albaabka Vienna markii ugu horeysay. Markii ay ku hareeraysan Vienna mar labaad 1683 oo kaliya ciidan Polish-Catholic ah ayaa awooday inay joojiyaan horudhaca Muslimiinta kuwaas oo doonayay in ay qabsadaan dhammaan Yurubta.
Dhanka kale, baaritaankii Roomaanka ayaa laga saaray xayiraadda kumanaanka Yuhuudda iyo Muslimiinta ee Spain iyo Yurub. Kaniisadda Katooliga Romaniga ah oo ay ku jirtay saliibiyadoodu waxay sidoo kale muujiyeen sawirka khatarta ah ee Kiristanka ah ee ku salaysan diinta Islaamka. Fikradda muslinka ah ee dawlad diimeed ayaa ka soo horjeeda mid ka soo horjeedda kaniisadda Katooliga, kaas oo xaddidaya ballaarintooda.
Tan iyo markaas Muslimiintu waxay u maleynayaan in dhammaan hawlaha adeega Masiixiyaddu ay ujeedadoodu tahay sidii loo dhisi lahaa dawladaha masiixiga ah. Waxay ku kalsoon yihiin isku dayga isku duubnaanta ee Kaniisadda Katooliga ah tan iyo markii labaad ee Vatican Council ay go'aansadeen in ay furaan Kaniisadda Katooliga ee walxaha wanaagsan ee diimaha adduunka oo dhan. Miisaaniyadda Pope John Paul II ee loogu talagalay iskaashiga adduunka ee adduunka Muslimiinta iyo Masiixiyiintu waxa ay la kulmeen shaki la'aan, muslimiintu waxay aaminsan yihiin in kaniisadda Katooliga ah si qarsoodi ah loo sugayo si loo dhiso Boqortooyada Masiixa ee dhulka. Hase yeeshee, kaniisadda Katoolikada, ayaa si dhaqso ah u ilaalinaysay Kaniisadda Katooliga ah ee ku jirta midnimada: "Boqortooyadaadu waxay timaadaa, sida dhulka joogtada ah ee jannada ku jirta", oo daboolaysa qayb ka mid ah maslaxadda adduunka oo leh 950 milyan oo xubnood.
Kaniisadaha Protestantku waxay ahaayeen asal ahaan "kaniisadaha muhiimka ah" kuwaas oo isku dayay in ay dib u habeeyaan kaniisada Katooliga. Waxay Kitaabka Quduuska ah u adeegsan jireen caadooyin ahaan iyagoo aasaas u ah, oo ah badbaadada nimcada keligood, iyagoo aan xaq u lahayn oo keliya Masiixa oo lagu kalsoonaan karo oo keliya dhexdhexaadiye, ma ahan hooyadiis Maryan.
Inta badan Kiniisadaha Protestant ee Yurub ee kuyaalkii ugu horeeyay ka dib dib-u-hagaajinta ayaa ahaa kaniisadaha maxalliga ah ee taliyeyaasha gobolka. Dhaqdhaqaaq xooggan oo xooggan ka dib markii caqabado iyo qorsho ay sababeen dhaqdhaqaaqyo xoogan oo ka socda USA, Yurub iyo Kuuriya. Caqli-gelinta qummanaanta iyadoo aan la xukumin maamulka kaniisadda dhexe, si kastaba ha ahaatee, waxay keentay in Brotestaniyiin badan oo xor ah ay ku dhacaan xoriyad aan cibaado lahayn. Kaniisadaha madaxbanaan ee leh qiyaastii 600 milyan oo xubnood ayaa daboolaya saddex meelood hal meel oo ah Masiixiyadda adduunka.
Brotestans, oo keliya oo ku soo muuqday 450 sano ka hor, waxay bilaabeen in ay gaadhaan heer caalami ah qarnigii 18aad iyo 19aad. Waxay u soo direen saxaafadda daabacaadda kowaad ee Bariga Dhexe waxayna daabaceen tarjumaadaha Kitaabka Quduuska ah ee luqado badan oo Islaami ah. Waxay ka dhigeen suurtogalnimada in ay nuqul ka samaystaan Kitaabka Quduuska ah, Quraanka, Taraybuunada iyo Boostada. Dumarka iyo Iskuullada Protestant waxay dhammaystireen dadaalkooda wacdinta iyagoo ku salaynaya ereyga daabacan ee Ilaah. Nasiib darro, hawlaha Protestant waxay taabteen inta badan Orthodox Chrisntians, taas oo keentay in mucaarad joogta ah oo diineed ay u fidiyaan muwaadiniinta.
Muslimiintu waxay eegaan Kaniisadda Protestant iyadoo la tuhunsan yahay, sababtoo ah qaar badan oo xubnahooda ka mid ah ayaa ka fiirsanaya in reer binu Israa'iil ay noqdaan dadka loo doortay Rabbiga. Sidaa darteed adeegayaashii mudaaharaadka ahaa ayaa inta badan loo arkaa inay yihiin basaasiin ama caawiyeyaal dadka Axdiga Hore ah.
Hase yeeshee, Muslimiinta Liberal si kastaba ha ahaatee waxay leeyihiin aragti ka duwan Protestantanka. Sheekh Ismaaciil wuxuu ku jawaabay: "Muxuu Brotestanka ugu horreeyay ee dayaxa?" Isaguna wuxuu jawaabtiisa u dhiibay su'aashiisa wuxuuna yiri: "Muslimiintu waa la ciribtiray fekerkooda, mana awoodno in aan horumarino farsamooyinka casriga ah. Makhaariyadu mar walba waa inay qirtaan denbiyadooda oo ay yeeshaan dabeecad jaban. Kaliya Brotestan waxay samaysay "ruux bilaash ah" waxaana lagu dhiirigelinayaa in ay isku dayaan suurtogalnimada. "Dhammaan dadaaladii lagu diidey fikraddiisa waa wax aan waxba tarayn. Xitaa tilmaamaya boomserang xun ee horumarka farsamo ma uusan beddelin maskaxdiisa. Waxa uu lahaa fikrado u gaar ah oo ku saabsan ujeedooyinka iyo hadafyada diimaha ee maanta jira.
Saddexda kaniisadood ee ugu waaweyni waxay u kala qaybsamaan kaniisado yaryar oo badan. Tirada kiniisadaha madaxbannaanida, synods ama ururada ay leeyihiin caqiidooyinkooda iyo maamulkooda waxay ka badan yihiin 22,000, lambar nagu hoggaamiya inaan toobad keeno haddii aan xubin ka noqono salaada Ciise Masiix: "in dhammaantood ay mid noqdaan, sida aynu nahay." (Yooxanaa 17:21-22)
Nidaamka caadiga ah ee kaniisadaha ku jira oo dhan ayaa ah saddexda qaybood ee aasaasiga ah ee Catechism: Salaadda Rabbi, Nicene Creed iyo Tobanka Amar iyo sharraxaadkooda sida ku cad Qiimaynta Cusub. Qirashadayada ku aaddan Ilaah, Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah waxaa loo tixgeliyaa sida Sharciga addoonnimada iyo sida loola dhaqmay Muslimiinta. Ma aqbalaan Ilaaha Saddexmidnimada ah, laakiin Alle keliya, kan keliya iyo kan keliya. Waxay sidoo kale diidaan Masiixa iskutallaabta Masiixa, aasaaska rumaysadkeenna (Sura al-Nisa 4:157). Islaamku wuxuu isu muujiyay inuu yahay awood caalami ah oo adduunka ka soo horjeeda (1 Yooxanaa 2:22-24; 4:1-5). Fikradaha noocan oo kale ah ayaa si qoto dheer uga dhex muuqda Muslimiinta oo dhan, xitaa haddii aysan si cad u sheegin. Dhaqanka Muslimiinta oo dhan ayaa ku dhexjiray fikraddan liddi ku ah diinta masiixiga.
Qof kasta oo aqoonsanaya kala qaybinta kaniisadaha Bariga Bariga iyo adduunka oo dhan maaha mid la yaab leh in la maqlo in Islaamku uusan midna midoobin. Sida kaniisadaha loo kala qaybiyay kun jeer, Islaamku wuxuu u egyahay gaari kale oo baaxad leh. Laba dariiqo oo waawayn ayaa laga soo saaray dhacdadii Islaamka.
Sunniyiintu waxay isu arkayaan inay yihiin kuwa ilaaliya aaminka Islaamka asalka ah sababtoo ah maaha inay raacaan oo kaliya Quraanka, laakiin waxay tilmaamayaan hab nololeedka nebigooda (Sunna). Kadib dhammaadkii kama dambaysta ee fallaadhaha garaadka (Mu'tazi'lites) santuuqa ayaa bilaabay inuu dhididka u jeedo. Islaamku wuxuu noqday diin, diin sharciyeed oo ku saleysan shareecada Islaamka. Qur'aanka, Sunna, waxay u egtahay mid lamid ah iyo isku afgarashada shantii dugsi ee sharciga waxay aasaaseen shareecada Islaamka. Waxay sameeyeen sharci ah in ay ka sameysteen aag kasta oo noloshooda ka qoto dheer mabaadii'da Islaamka ee iimaanka. Sunniyiinta ayaa boqolkiiba 84 ka mid ah Muslimiinta oo idil, ku dhawaad hal bilyan oo kuwa raacsan ee Muhammad, tiro la mid ah xubin ka mid ah kaniisadda Katooliga.
Inta lagu guda jiro horumarinta Islaamka, dadka raacsan ee Ali - oo ah wiilka la korsaday ee Muhammad oo sidoo kale ahaa wiil uu adeer u ahaa iyo wiilkii-gabadha - ayaa kala qaybiyay Sunniyiinta oo ay la wadaagaan labada wiil ee Cali: Xasan iyo Xuseen. Sababta qaybtani ma ahan dood murugo leh oo ku saabsan rumaysadka, laakiin dalabkoodii hore ee xukunka xukunka xukunka xukunka Islaamka. Shiicada waxay dalbadeen in Cali iyo wiilashiisa ay la wareegaan hoggaaminta Islaamka ka dib dhimashadii Muhammad. Tani waxay muujinaysaa in Islaamku uu isku dayo inuu marka hore noqdo dawlad iyo ma aha oo kaliya diin. Shiiciyiintu waxay sii wadeen inay ku ammaanaan Cali iyo labadiisa wiil, ku dhawaad iyaga oo u ducaynaya ilaahyo iyo horumarinta jihaadka iyaga u gaar ah - toddoba koox, laba iyo tobankii qofba - oo ay adeecaan iyada oo aan su'aal ahayn. Ayatollahs waxay sheeganayaan in ay helayaan waxyaabo toos ah oo ka soo jeeda imamka ugu dambeeya. Shiiyiintu waxay daboolayaan 14% ilaa 16% diinta Islaamka, iyada oo leh 200 oo xubnood.
Ka sokow Shiitiyada waxaa jira dad badan oo Muslim ah, siyaabo, amarro, bulshooyin, axdiyado iyo horyaal kuwaas oo aan diyaar u ahayn inay midoobaan, laakiin si adag u shaqeeyaan si ay u ilaaliyaan madaxbannaanidooda.
Kadib laba mowjadood oo Islaami ah oo Europe ah ayaa ku fashilmay Yurub (Ciraaq 732 iyo 1683) sababtoo ah ciidamadii Katooliga ahaa, saddexdii bilood ee la soo dhaafay waxay bilaabantay 1973 ka dib markii ay si kedis ah kor ugu kacday qiimaha saliidda. Shirkadaha saliida ee soo saara saliidda ayaa noqday kuwo aad u tiro badan. Tan iyo inta caadiga ah ee faa'iidada saafiga ah waa in lagu bixiyaa musharaxnimada Islaamka fikrado fara badan oo ka mid ah muslimiinta maskaxiyan ah ayaa la maalgelin karaa. Hassan al-Banna, oo ah aasaasihii walaalkeed Muslimka, ayaa ku wacdiyey: "Muslim ah oo tukanaya, soonka iyo bixinta canshuurta diimeed maaha mid dhab ah oo Muslim ah. Kaliya haddii Shariifku xukumo dowladdiisa oo uu ku nool yahay, Islaamku wuxuu ku soo noqdaa midnimadiisa. "Walaalkiisa Muslimka ah wuxuu kala qaybiyay in ka badan 50 kooxood oo ka kala yimid waddamada Islaamka intooda badan. Waxay isku dayayaan in ay dib u habeeyaan Islaamka iyo in ay soo qaadaan waddamada xoriyadda ah ee Islaamku ay hoos yimaadaan xukunka Shariifka.
Isla mar ahaantaana xagjirnimada muslimiinta ayaa bilaabay olole ballaaran oo lagu qorsheynayo Islaamka shanta dal oo dhan. Masaajidada ayaa meel walba ku rasaaseeya sida likaha. Masiixiyiinta Naey waxay soo dhaweeyeen Muslimiinta bulshadooda kala duwan. Ma rabaan in ay aqoonsadaan in marnaba ka hor Muslimiinta badan oo ku noolaa inta badan dalalka Protestant sida maanta! Waxaan ku dhex noolahay dagaalkooda quduuska ah - mana ogaanno!
Muslimiintu ma noolaan karaan ama u maleynayaan inay isku mid yihiin. Mid waliba waa shakhsi. Dhammaan kala soociddu maaha mid ku filan ama been ah. Nooc gaar ah oo Muslim ah ma jiro. Tartamo kala duwan, caadooyin, waxbarasho iyo xukuno ayaa mid waliba ka mid ah. Waxay noqon kartaa khalad in laga hadlo "Muslimka". Qofkii doonaya inuu fahmo Muslimiinta wuxuu u baahan yahay waqti. Waa in aan waydiisanno mid kasta oo uu ka yimaado, waxa uu ku fekerayo ama dareemayo iyo waxa dhibaatooyinkoodu yihiin. Dhammaan jawaabaha ra'yiga ah waxay noqonayaan kuwo ciriiri ah. Si loo noqdo saaxiibo Muslimiin ah, waxaan u baahannahay si aan u fahanno. Tani sidoo kale waa run dhab ah! Fikradaha horay loo soo diyaariyay waa in lagu dabaqo xaqiiqda. Muslimiintu si deg deg ah ayey u dareemi karaan oo fahmi karaan inaan ixtiraameyno oo aanan isku dayeynin inaan ka faa'iideysano, laakiin aqbal sidii isaga. Injiilku wuxuu u shaqeyn karaa awoodda Ilaah kadib markii la dhisay kalsooni. Salaadda joogtada ah waa qarsoodi ah duco joogta ah.
In kasta oo xaqiiqda ah in qof kasta oo Muslim ah uu yahay shakhsi, noocyada qaar ka mid ah qaybaha ayaa la soo saari karaa - iyada oo la ilaalinayo - sida dhinacyada guud ama midaynta, si aan ugu hadlo kooxaha kala duwan ee muslimiinta.
Meelaha miyiga ah iyo jaamacadaha, masaajidada iyo xirfad kasta waxaad ka heli kartaa Muslimiinta doonaya inay ku noolaadaan sida ku cad Quraanka iyo dhaqankooda. Qaar ka mid ah dadka yar ayaa ka baratay Quraanka Carab by wadnaha ama gebi ahaan inta lagu jiro caruurnimada. Waxay xirtaan "qurxinta Qur'aanka" taas oo ay ku fahmaan adduunkooda. Marka laga reebo dhaqanka Qur'aanka iyo shuruucda Shareecada, wax qaab nololeed kale ah ma ahan kuwo la aqbali karo. Addoomada kutubta, diimaha kale iyo dhamaan cibaadeeyayaasha ayaa loo tixgeliyaa sida nadiif ah loona habaaray Allah. Mamnuucid iyo raashin u oggolaanaya inay adduunkooda u qaybiyaan doofaarka iyo dadka saafiga ah. Si aad ugu iibsato hilibka suuqa oo Basmallah lagaga hadlo qandhada waa wax la yiraahdo muslimiin muxaafid ah. Si kastaba ha noqotee, haddii ay waajib ku tahay inay wax cunaan, ma noqon doonto dembi iyaga.
Kuwa diinta diintooda looma oggola inay "u fakaraan ama u hadlaan si caqli leh" oo ku saabsan Quraanka. Haddii aad su'aasha keliya ee su'aasha ah waydiisanayso dhismaha oo dhan ee adduunkoodu waxay noqon lahaayeen col. Sidaa darteed, waa inay difaacaan runta rumaysadkooda mar kasta oo ra'yi ka duwan la siiyo. Qur'aanka waa noloshooda. Waad ku macnayn kartaa injiilka oo keliya iyaga oo adeegsanaya ereyada Quraanka, kuna buuxi macnaha Injiilka.
Xumad ahaan, xitaa ardaydu waxay ku badan yihiin kuwa ilaaliya. Haddii ay ka yimaadaan tuulooyinkooda magaalooyinka waaweyn oo ay u arkaan nolosha xorta ah, dembiilayaasha, waxay dareemaan inay ka xishoodaan dadkooda, waxayna ku noqdaan xididdada dhaqankooda oo ay noqdaan kuwo muslimiin ah oo jacayl badan ka badan intii hore. Waxay isku dayaan inay xaqiijiyaan waxa sal u ah noloshooda oo ay difaacaan guud ahaan ansixinta Qur'aanka ee habdhaqan ahaan.
Marka asaasiyeyaashan oo kale ay yihiin kuwa caqli-gal ah, waxay isku dayaan in ay dadkooda wax ka bedelaan si nabadgelyo leh. In yar oo ka mida rumaystayaashan ayaa diyaar u ah inay dilaan Muslimiinta xorta ah ama inay galaan burcadda rabshadaha si ay u hirgeliyaan mabaadii'da Islaamka ee dalkooda.
Tirada dadka asaliga ah ee muslimiinta ah way ka duwan yihiin waddanka. Waxay gaaraan inta u dhaxaysa 15 iyo 35 boqolkiiba. Marka loo eego doorashooyinka siyaasadeed ee goboladooda waxay helayaan oo keliya 10 ilaa iyo boqolkiiba 20% dhammaan codadka. Inta badan Mus-lims ma aha xag jir. Laakiin Qur'aanka ayaa amar ku siiyay inay fuliyaan shareecada Islaamka ee dalkooda Islaamka ah wax kasta oo ay ku kacday!
Sida dalalka loogu yeedho inta badan Muslimiinta ku nool wadamada Islaamka waa mid xor ah, jilicsan oo nabadda jecel. Iyadoo aan shaqo badan lahayn waxay shaqeeyaan si ay u helaan dakhli ku filan si ay u quudiyaan qoysaskooda. Ma xiiseynayaan hawlo badan. Waxay rajeynayaan inay haystaan qaboojiye, hannaan weyn oo TV ah, iyo haddii ay suurtagal tahay, baabuur ama mootooyin. Inta badan, diintu waa arrin siyaabo kale ah ama macnaheedu yahay in ganacsi la sameeyo.
Nolol maalmeedka, muwaadiniinta xoriyada ah waxay u dhaqmaan xishood, sababtoo ah kii aan ku noolayn sida dhaqanka Islaamka ma iibsan karo ama iibin karo muddo dheer. Dad badan ayaa isticmaala erayada diineed ee ay ku hadlaan, Islaamku si cad ayay u difaacaan dhaqankooda waxayna taageeraan caadooyinka xukunka. Haddii kaliya hal xubin oo qoyska ka mid ah uu noqonayo Christian wuxuu abuuri doonaa carqalad. Magaca saxda ah ee beeshu waa mid necbaan, hanjabaad ah ama dibadda loo diro. Xaaladna maaha in urta ay daacad u tahay diinta Islaamka oo ay magacooda ku soo celiyaan. Marka laga reebo in xubno ka mid ah qabiilladaas ay aad u yartahay tukashada rasmiga ah ama keliya si ay u arkaan. Waxay si dhib leh u furayaan Quraanka si ay uga fikiraan. Nooc la'aan ah diin ayaa ku dhacday inta badan muslimiinta. Waxay ka dhigtaan 50 ilaa 70 boqolkiiba dadweynaha, waxay ku xiran yihiin gobollada ama dalalka ay ku nool yihiin.
Marmarka qaarkood midnimada iyo diinta Islaamku way isku biiri karaan. Markaa diinta ayaa taageeri doonta dareenka qaranka iyo waliba sida. Si kastaba ha noqotee, ka dib markii waddanku uu gaarey Islaam-madax-bannaan, mawqif xiisa leh ayaa hirgelin doona. Shaqada, kibista iyo qoysku si dhakhso ah ayey uga dhigaan diinta.
Muslimiinta Liberalka waxay iftiimiyaan bayaannada aadanaha ee Quraanka iyo caadooyinka. Mamnuucista cuntada, amarrada ku saabsan Qowrka Jihaadka (Jihaadka), xaaladda dumarka Qur'aanka ama ciqaabta naxariis darrada ah ayaa la iska indhatiray iyadoo la raacayo qawaaniintaas oo ay lagama maarmaan u ahayd safarka sariirta ee maalmihii Muxammad. Maalmahan, marxaladaha horukaca, sharciyadan ma ahan mid ku haboon. Libaraalku waxay ku noolyihiin si ay u noqdaan Islaam.
Inta badan dawladaha Islaamku waxay ku socdaan waddo isku mid ah. Waxay u oggolaadaan hoggaamiyeyaasha masaajidda inay ilaaliyaan waajibaadka shakhsiyeed ee shareecada. Dhammaan mabaadiida la xidhiidha Dagaalka Quduuska ah ama ciqaabta daran ayaa weli ku jira gacanta dawladda. Waxay isku dayaan inay wax ka qabtaan shareecada Islaamka iyo xuquuqda aadanaha caalamiga ah, oo ka soo horjeeda dhaqaatiirta dalkooda. Weerarrada argagixisada ee Masar ama Aljeeriya waa wax kale oo aan ahayn dagaal si loo fuliyo shareecada oo dhan. Tani waa xaqiiqda ah muwaadiniinta xorta ah ee ka jira dowladdooda oo doonaya inay ka hortagaan kharashyada oo dhan.
Badhtamaha Muslimiinta oo dhan waa haween! Waa inaanan ka fikirin kaliya ragga markaan ka hadleyno Muslimiinta. Dumarku waxay door weyn ka ciyaaraan diinta Islaamka. Waxay inta badan saameyn ku yeeshaan carruurta qoysaskoodu ka badan yihiin nimankooda.
Si kastaba ha ahaatee, Quraanka si cad ayuu u qoraa:
Oo ragga ma aha sida gabadha (Sura Al-Imran 3:36).
Muuqaalkan Islaamku wuxuu leeyahay asal sharci ah. Quraanka ayaa sheegaya:
Nimanku waxay ka sarreeyaan haweenka, Alle ayaa horay u bixiyay mid ka sarreeya kan kale, taas oo ay (raggu) ka bixiyeen lacagtooda (ee loogu talagalay dumarka sidii aroosadda) (Sura al-Nisa 4:34).
Maxkamadda marqaatiga mid ka mid ah nin Muslim ah ayaa la siman labadii marxaladood ee dumarka muslimiinta ah (Sura al-Baqara 2:282). Xaaladaha dhaxalka ah ee dumarka waxay helayaan kalabar kala badh in ka badan sida ninka ama wiilkeed, walaashaa kala badh in ka badan sida walaalkeed ama gabadh kala badh sida wiil (Sura al-Nisa 4:11,176). Sharci ahaan haweeney kaliya ayaa u dhiganta kala badh ka mid ah nin.
Nin waxaa loo oggol yahay inuu guursan karo afar naagood (Sura al-Nisa 4:3) haddii uu dhammaanba si isku mid ah u jeclaan karo. Maaddaama ragga intooda ugu badani ayan helin wax ku filan oo ay ku siiyaan afar haween ah iyo caruurtooda, kelidood waxay ku guulaystaan. Haweeney hal ninkeeda ah, sida xaamilo ah, waxay ka cabanaysaa murugo iyo hinaasad ka badan inta aynnu malayn karno.
Qoyska Islaamka ah nin ayaa xaq u leh inuu wax barto "xaaskiisa. Hadday noqoto mid caasinimo ah, wuxuu wax ka qaban karaa "khibrad". Haddii ay sii wado inay noqoto mid madax adag, waxay diidi kartaa xuquuqdeeda isku dhafka ah iyo haddii ay ku adkaysato, waxa uu xaq u leeyahay inuu garaaco ilaa uu soo gudbiyo, laakiin looma oggola inuu jebiyo lafihiisa (Sura al-Nisa 4:34).
Sida laga soo xigtay Quraanka (ma ahan sharciyada Turkey, Masar ama Tunisia iyo qaar kale oo Islaami ah) nin ayaa xaq u leh inuu furo xaaskiisa sabab kasta. Kadib mudo sugitaan ah saddex ilaa afar bilood wuxuu mar kale u guursan karaa, mar kale furi oo mar kale mar kale guuri. Ka dib marka ay furto markii saddexaad, waa in ay isqabtaa nin kale. Haddii uu ninkan sidoo kale diido, ninkeeda ugu horeeya waa loo ogol yahay inay mar kale mar kale guursato (Sura al-Baqara 2:229-230). Su'aalaha isdaba joogga ah ee haweenka ee wadamada qaarada Islaamka ayaa si qotodheer u soo jiitay intii aan uur qaadi karno. Yaa leh wacitaan ilaahi ah oo la hadlaya dumarka Muslimiinta ah iyo inay iyaga u keenaan injiilka xoriyadda u gaarka ah iyagoo ku salaynaya cafis dhamaystiran iyo hadiyadda Ruuxa Quduuska ah?
Ragga Masiixiyiinta ah waa inaysan keligood la hadlin dumarka Muslimiinta ah, laakiin waxay joogaan kaliya xaaskooda. Sidaa darteed, dumarka Masiixiyiintu waa inay qabtaan adeeggan la dayacay iyo inay la hadlaan haweenka iyo gabdhaha Masiixa oo ka markhaati kacaya wixii ay u qabaan ee ay la yeeshaan Badbaadiyahooda quduuska ah. Hooyooyinka Muslimiinta ah ayaa ah kuwa keena carruurtooda. Sababtan awgeed, hirgalinta haweenka Muslimiinta ah, gaar ahaan hooyooyinka, waxay kaalin muhiim ah ka qaadataa ka dhexgalka Muslimiinta mar walba. Barnaamijyada TV-yada ee haweenka iyo buugaag loogu talagalay haweenka ku qoran bam-gacmeedyada Masiixa ayaa si degdeg ah loogu baahan yahay. Jiilaal ka hor oo ka yar 25 boqolkiiba haweenka iyo gabdhaha muslimiinta ah ayaa iskuul dhigan kara! Maanta tirada gabdhaha iyo haweenka waxbartay ayaa ku jira inta u dhaxaysa 40 ilaa 70 boqolkiiba dadka. Yaad ka mid tahay aqoonsiga fursadan cusub oo ku qabtaa Gosplis?
Dumarka Islaamku mararka qaar aad ayey uga duwan yihiin ragga iyo diinta ragga. Muxammad waxa uu u malaynayaa in uu sheegay in uu arkay jahannamo boqolkiiba 90 dadka degaanka ah waxay ahaayeen haween, sababtoo ah marwalba ma aysan adeecin nimankooda. Muhamusmad waxay sheegtay inay sidoo kale arkeen janno. Kaliya 10 boqolkiiba dadka degan waxay ahaayeen haween sababtoo ah kaliya dhowr nin ayaa qiray in haweenkoodu ay ahaayeen cibaado iyo marwalba adeeca. Takoorida noocan oo kale ah waxay dumarka ku dhiirrigelisaa inay ilaaliso sharciyada Isku'iil in ka badan nimankooda, iyagoo rajeynaya inay helaan mid ka mid ah meelaha naadirka ah ee haweenka ku jira.
Yaa u naxariistaa haweenka Muslimiinta ah oo isku dayi doona si daacadnimo ah si ay u helaan siyaabo ay uga faa'ideystaan dhibaatooyinkooda ee adduunkan iyo kan ku xiga magaca Ciise?
Badhtamaha Muslimiinta oo dhan waxay ka yar yihiin 18 sano. Qaar ka mid ah dalal Islaami ah oo aan la arki karin waxay joogaan 16 sano. Qof kasta oo waayo-aragnimo leh ku leh shaqada dhalinyarada wacdinta waa in la siiyaa xaqiiqadan! Caruurta, dhalinyarada iyo dadka waaweyn ee dhalinyarada ah waxay u baahan yihiin barnaamijyo ka duwan kuwa dadka waaweyn. Xaqiiqadan tirakoobiga ahi waxay dalbanaysaa dib-u-fiirin iyo dib-u-habayn lagu sameeyo xeeladaha qaar ee khaldan iyo xitaa kuwa wada-hawlgalayaasha ah.
Dhalinyarada oo dhan adduunka oo dhan waxay jecelyihiin ciyaaraha kubadda cagta iyo kubadda cagta. Qofkasta oo ku safraya wadamada Islaamka ayaa si xiiso leh looga codsanayaa Beckenbauer, Rummenigge iyo Schumacher. Becker iyo Graf waxay ahaayeen kuwo aad u yaqaan magaca dhallinyarada Muslimiinta.
Dhalinyarada Islaamka waxay bartaan akhriska iyo qorista maanta. Waxay raadiyaan sheekooyin xiiso leh. Waxay xiiseeyaan aqoonta. Waxay doonayaan inay wax bartaan. Waxay aaminsan yihiin sayniska waxayna u maleynayaan inay dunidu ku guulaysan karaan warbixinnada fasalka wanaagsan. Bixinta basaska, buugagga iyo joornaalada ku habboon maskaxda dhalinyarada, koorsada dugsi ee Kitaabka Quduuska ah ayaa si fudud loo dhisi karaa, kuwaas oo tobannaan kun oo ka mid ah ay ka qayb qaadan doonaan waqti gaaban.
Dadka intooda badani ma raadiyaan dembi dhaafka. Ma ka fikiraan tawbadkeena ama iimaanka. Waxay doonayaan inay wax kasta maalgeliyaan: Ciise, Bawlos iyo Yooxanaa waxay u egyihiin sidii Marx, Lenin iyo Mao. Tani waxay u harraadsan tahay aqoonta waa albaab furan oo aan ku bixin karno injiilka oo aan lahayn caqabado waaweyn. Qaar badan oo ka mid ah dadka doonaya aqoonta ayaa la taaban doonaa waxaana lagu beddeli doonaa jacaylka uu u qabo Ciise Masiixa, jacaylkiisa, hoos-u-qaadka iyo nabadda.
Tirada sii kordhaysa ee ardayda dugsiga sare iyo jaamacadda waxay leeyihiin kumbuyuutar ama helitaankooda internetka ee qadariska ama guryaha saaxiibadood. Nasiib darro, khilaafaadyada u dhexeeya kooxaha muslimiinta iyo muusikada dareenka ah ee ka soo jeeda beelaha ayaa ka soo baxaya dhexdhexaadintan. Laakiin qof kasta oo ka mid ah barnaamijyada ruuxiga ah ee caawiya dhalinyarada qaangaarka ah ayaa dhawaan diiwaangelin doona kumanaan qof oo marti ku ah xaafaddooda xitaa wadamada Islaamka ah ee xiran. Gaar ahaan baahida ayaa ah isbarbardhig hoosaadka u dhexeeya injiilka iyo diinta islaamka iyo jawaabaha wanaagsan ee su'aalaha jilicsan.
Dhiirrigelinta heesaha wanaagsan ee masiixiyiinta ee leh heesaha quruxda ayaa sidoo kale leh qaybtaan. Diidmada jarmalka Jarmalka ama gabayada diinta ee kaniisadda Mareykanka maaha mid soo jiidasho badan Muslimiinta. Meel walba oo injiilka lagu soo bandhigo farriimo qumman oo dhexdhexaad ah oo ah nidaam degaan ah oo shan ama toban ah oo ah muusikada muusikada, midna wuxuu ogaan doonaa in xataa kuwa aan garanaynin Kitaabka Quduuska ah ay heesayaan heesaha cusub. Xushmadda qaddarinta shaqaalaha iyo cabsida garsoorka adduunku weli weligiin kama jiraan adduunka Islaamka, inkastoo casriyeynta casriga ah.
Marar dhif ah ka hor intaan fursad loo haynin faafinta dadka Muslimiinta ah waa mid aad u ballaadhan maanta, sababtoo ah qaybta yaryar ee Islaamku waxay baraneysaa akhrinta, qorista iyo fikirka, iyo qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa si xiiso leh u eegaya halyeeyada ciyaaraha iyo farsamada. Gabadh bikrad ah oo ka tirsan Hadramaut, oo ku noolayd lafa xeebeedka weyn ee al-Khali, markii la waydiiyay su'aal ku saabsan nooca muusikada ay jeclayd jawaabtay: "Heesaha ABBA ee Iswiid."
Tan iyo jiilka xaadirka ah ee Muslimiintu ay baranayaan in ay ka fekeraan, waxay bilaabayaan inay su'aalaan dhaqankooda iyo diintooda. Xaaladaha daciifka ah ee Islaamku mar dambe dib uma laaban karaan.
Qaar ka mid ah dadka Muslimiinta ah ee xagjirka ah waxay weydiinayaan: "Waa maxay sababta ciidammada 250 milyan oo Carab ah aanay awoodin inay burburiyaan askartii shantii milyan ee Israel ee 50kii sano ee la soo dhaafay? Waxyaabo khaldan halkan. Waxyaabaha naga khaldan!"
Qaar kale ayaa sheeganaya: "Ereyga Islaamku wuxuu leeyahay micno muhiim ah. Mid ka mid ah kuwani waa: Samaynta nabadda! Waa maxay sababta markaa kala badh ka mid ah dagaallada adduunka oo dhan ku xiran yihiin wadamada Islaamka? Maxay tahay sababta aan u dhoofinayno argagixisada, dagaallada sokeeye, dhiig-daadinta oo aan ahayn nabad iyo amaan?"
Qodobada qaar: "Shirkadaha saliidda soo saara ee Islaamka waxay ka tirsan yihiin dadka ugu taajirsan dhulka! Laakiin in ka badan toban dawladood oo Islaami ah ayaa ka mid ah kuwa ugu saboolsan dalalka oo dhan, waxayna ka hooseeyaan xagga saboolnimada. Maxaad u taqaanaa khayraadka Islaamka ee caanka ah ma siidaan taageerada Muslimiinta saboolka ah ee baahan? Haddii ay yar yareeyaan, maxay sababta qaybta ugu weyn ee taageeradu ay u xejinayso dabaqyada sare ee dawladaha, iyada oo aan wax xaddid ah u haynin dadka baahan?"
Darawal Hindi ah oo shiicada Islaamka ah ee Sacuudi Carabiya ah ayaa la weydiiyay haddii uu noqday qof diin ah oo Muslim ah mudo kow iyo toban sano ah adeegga mid ka mid ah mas'uulka labada goobood ee quduuska ah. Darawalka Muslimku waa uu baxsaday: "Xidho! Ma doonayo inaan maqlo wax ku saabsan diinta Islaamka! Ma rabo inaan wax ka qabano mar dambe. Haddii aad ogtahay waxa ay ka hadlaan, cabaan, oo ay sameeyaan marka ay kaligood aadan rumeynin. "Marka la weydiisto waxa keena cawaaqibka uu jeclaan lahaa inuu ka soo baxo aqoontan waxa uu ku jawaabay:" Waxaan baran doonaa isfahanka iyo iimaanka Christian si loo qiimeeyo mid ka mid ah labaduba waxay bixiyaan saldhigga ugu fiican nolosheyda. Taasna waan raaci doonaa."
A Islaamka qalin jabin Al-Azhar Jaamacadda ee Qaahira waxay rabtay in ay kaamil noqoto oo ay u calaamadiso carabi oo ka mid ah qabaa'ilka Sacuudi Carabiya. Wuxuu baray suugaanta Islaamka ee Jaamacadda Riad. Inta badan ardaydu waxay ka soo horjeedaan isaga oo sabab u ahaa fikradaha casriga ah ee muxaadarooyinka, halkii uu ka noqon lahaa rinjaal cad oo uu ku dhajiyay qoryaha galbeedka. Markay shaqadoodu kor u kacday, ardaydana waxay dhagxiyeen dhagaxyo yar yar intii lagu jiray muxaadaro oo uu ka careysnaa, oo ka cararay hoolka muxaadarooyinka, ayaa loo calaameeyey qolalka macallimiinta ee ku yaal qolkiisa, waxay qaateen Quraankana waxay isku dayeen inay is dajiyaan xanaaqiisa oo leh codad sare oo dheeri ah. Si dhakhsa ah ayuu u joojiyay oo qirtay: "Xilligan waxaan ogaaday in buuggani uu u shaqeynayay sida maskaxda ee maskaxda Muslimiinta, waxaanan joojiyay fikirkooda iyo anshaxooda." Waxa uu qaaday Qur'aanka kaddibna xanaaqay, waxaa lagu ordi jiray beerta hudheelka oo isku dayay in ay gubaan bogagga.
Macallimiin ka mid ah albaabada way maqleen xajinta iyo Qurxinta Quraanka kariimka, waxay u dhaqaajin jireen si ay u dejiyaan. Laakiin markaa dhammaantood way iska aamuseen oo waxay la yaabeen hareeraha Qur'aanka. Qof kastaa wuu ogyahay: denbigan waxa uu dalbanayaa gubid degdeg ah ee dembiilaha. Qofna ma dhehin erey. Macallimiintu waxay dareemeen dareenkooda, qolkiisa oo loola cararay, waxay qaateen lacagtiisa iyo baasaboorkiisa, oo loo yaqaan taxi, oo u orday garoonka, oo ka cararayay dabinka dilaaga ka hor inta uusan xirneyn.
Nimankan ma aysan xidhiidhin Masiixiyiinta. Waxay xaqiiqsadeen daciifnimada Islaamka ee dib udhaca dalalkooda, waxayna isku dayeen inay ka baxsadaan xabsiga ay ku hayaan ruuxooda. Ardayda caafimaadka, gabadha, sheekhyada iyo muslimiinta caadiga ah waxay si cad u tilmaamayaan iskahorimaadka Quraanka kariimka ah, oo si xushmad leh u raadiya jawaabaha iyo ficillada nolosha ee wanaagsan. Waa in aan ku tukado si aan u helno Mushkiladaha murugaysan ee ka hor intaanay ku dhicin gacmaheeda. Malaha ilaa shan boqolkiiba Muslimiinta oo dhan kama fogaanayaan diintooda iyo in muddo dheer ay qof u muujiyaan.
Barnaamijka TV-ga waxaa la weydiiyay xiddigga filimka Muslimka kaas oo uu ka tirsan yahay. Wuxuu si aan fiicani ugu jawaabay: "Diinta ugu wanaagsan dunida, Islaamka!" (Suras Al 'Imran 3:19,110; al-Fath 48:28; al-Saff 61:9;
Dheeraad ah ayaa la waydiiyay haddii uu aaminsan yahay jiritaanka Allah, ayuu yiri: "Maya! Hubaal maaha! Caqiidada noocan oo kale ah waxay u fiican tahay dadka waayeelka ah ka hor intaanay dhiman iyo carruurta yaryar, laakiin waxaan ka mid nahay jiilka ficilada sameeya! "Weriyihii naxdinta lahaa ayaa sii waday inuu waydiiyo sida uu uga jawaabi lahaa haddii Muslimiinta la weeraro. Xiddiga filimka ayaa isla markiiba ku jawaabay: "Markaas waxaan noqon lahaa kii ugu horreeyay ee qaata Kalazhnikov oo difaaco diinta Islaamka." Waxa uu naftiisa u tixgeliyey inuu yahay muslimiin inkastoo uusan rumeynin jiritaanka Eebe, mana uusan tukan! Islaamku ma aha oo kaliya riwaayad, laakiin sidoo kale dhaqan, dawlad iyo bulsho.
Intii lagu jiray muxaadaro ku saabsan xiriirka u dhexeeya diinta iyo Masiixiyadda Turkiga yaryar ayaa si adag uga soo horjeestay af-hayeenka: Islaamku waa mid aad uwanaagsan, nicer ah, oo bani-aadminnimo ah oo ka sii badan intii uu ka maqlay maqaalkan. Markii dhallinyarada Turkiga lagu martiqaaday inay sharaxaad ka bixiyaan fikradiisa makarafoonka horta dhegeystayaasha, wuxuu ku hadlayay dareen ahaan si uu u gaaro aragti u gaar ah. Afhayeenka ayaa si dhaqso ah u ogaaday asalkiisa, isaga oo carqaladeeyey: "Weligaa noloshaada ma furay Quraanka?" "Maya," Turk ayaa ka yaabisay. Markii la weydiiyay sida badanaa uu ka qayb galay salaadda masaajidka, wuxuu ku jawaabay in uu marna ku tukaday! Laakiin wuu difaacay diintiisa. Islaamku waa ka badan yahay Quraanka iyo Salaadda. Waxa uu ka mid ahaa Muslimiinta casriga ah ee lumiyay rumaysadkooda - laakiin weli waxay difaaceen Islaam ah in aysan fahmin.
Dr. Nasrin oo ah cilmiga cudurada dumarka ee Bengali wuxuu ku baaqay in wax laga qabto tafaftirka Quraanka marka la eego jagada haweenka iyo habdhaqanka xun ee gabdhaha qaangaarka ah ee guurka. Waxay ku khasabtey in ay u cararto Iswiidhen sababtoo ah ragga muslimka ah waxay ka maseyrsan yihiin xuquuqdooda iyo - sababtoo ah waxay ku adkaysatay inay su'aasha Quraanka waydiisato! Dhakhtarkan ayaa weli iska leh naftiisa Muslim, si kastaba ha ahaatee, waxay ka luntay rumaysadka Quraanka Quraanka kariimka ah iyada oo loo marayo waaya-aragnimadeeda.
Siyaasiyiinta Islaamiga ah iyo kuwa qalin-jebiyey jaamacadaha ku nool dibedda ayaa mararka qaarkood aad uga khatar badan Islaamka. Waxay ku nool yihiin nolol faaruq ah oo ay ka lumeen iimaanka aan shuruudaha lahayn ee Alle. Si kastaba ha noqotee qoyskooda, waxay ka qaybqaataan salaadda marka ay u yimaadaan dalkooda hooyo. Waxay si muuqata u soomi karaan inta lagu jiro bisha Ramadaan waxayna si cad u siiyaan cashuurta diintooda. Dhinaca kale, waxay ka fogaadeen sharciga Islaamka, waxayna raadinayaan goobo cusub oo ku yaalla da 'yarta gawaarida iyo saldhigyada maraakiibta. Diidmada sii kordhaysa ee Islaamiyiinta xagjirka ah ayaa la xaqiijiyay in ay la kulmaan aqoon yahanada, farsamoyaqaannada iyo shakhsiyaadka dadweynaha ee Bariga iyo Galbeedka, tan iyo markii ay aqoonsadeen in tiro badan oo noocaas ah aysan Muslimiin ahayn, laakiin ay ku nool yihiin nolol sharaf leh.
Tirada cibaadada Islaamku maaha kuwo ballaadhan, qiyaastii hal boqolkiiba, laga yaabo inay ka badan tahay waddamada ay ku habboon tahay wada-xaajoodka. Waa la aqoonsan karaa, sida kuwa dhaqdhaqaaqa ee Turkiga, weerarrada ugu weyn ee wargeysyada iyo buugaag ku saabsan Muxammad iyo diintiisa.
Hantida hoose ee Muslimiinta waxay u jajabisaa sida sirqoolka ah oo ah xagjirnimada xagjirka ah iyo qarsoodi qarsoon. Waxay abuurtaa qanacsanaanta, niyadjab iyo raadinta jidad lagu kalsoonaan karo. Mid ka mid ah isbeddelladani waxaa laga arki karaa qarsoodiga islaamka ee (oo badanaa loo yaqaan Suufi oo la yiraahda Tariqas) kuwaasi oo laga yaaboin ay fogaadaan timo-kala-soocida Islaamka Muftis Islaamiga ah iyo takhaatiirta. Kuwa raba kuwa runta ah ee khibradaha diimeed waxay kala soocaan dhaqdhaqaaqyada masaajidka masiixiga ah ee la soo gudbiyay iyo kuwa naftayda burburiyay ee ku celceliya salaadda cibaadada. Waxba kama ay helin halkaas oo ku qanciya naftooda ama ruuxooda. Waxay ka baxaan rasmiga Iskulam, oo ay ku midoobaan amarro, isku dayaan inay abuuraan shakhsiyad shakhsi ah iyo cibaado daacadnimo ah oo ka imanaya Qur'aanka iyo qoraallada aan Islaamiga ahayn.
Waxaad ka heli kartaa Sufiska iyo Tariqas kala duwan ee Morocco, Suudaan, Turkiga iyo Pakistan. Xataa Shiinaha iyo Indo-gaia Islaamku waxay u qaybsan yihiin qarsoodi iyo laanta sharciyeynta ah. Dalka Morocco waxaa laga arki karaa xayawaanka loo yaqaan 'whitewashed tombs' oo ku yaal buuraha waaweyn ee waddooyinka waaweyn. Haweenka aan caruuri lahayn waxay marmarka qaarkood xoojinayaan daboolka ka soo horjeeda qabriga si ay u noqdaan kuwo bacrin ah. Suudaanta daanyeeradu way boodaan, boodaan oo waxay ku dhex wareegaan boodhka si ay u muujiyaan ujeedadooda iyo caqiidadooda.
Masar Sufiis mararka qaar fadhiiso ama ku istaagaan wareegyada oo ku celi magaca Allaah ama mid ka mid ah sifadiisa: "huwa, huwa, huwa ..." marar aan tirin illaa mid ka mid ah midkoodna ku dhufo ama uu ku hadlo afafka ajnebiga ah. Turkiga ardayga kooxahan oo kale ayaa arkay: "Waxaa naloo hanjabay inaan wacno jinni iyo inaan u dirno iyaga ka dib markii ay nagu adeegeen." Hal gabadh ayaa qirtay in Shaydaanku booqan doono jimce kasta. Saaxiibadu waxay isku dayday inay u sheegto inay ku riyootay, laakiin waxay sharaxday markii ay si xun u xanuusanaysay sida aabaheed uu aabaheed u geeyey sheekha Sufi oo iyadana bogsiiyey saamayn ruuxi ah. Tan iyo markaas waxaa la dhibay toddobaadkii by booqashadii shaydaanka.
Pakistan guddi koox ayaa ku dhaqma fikrado la wadaago. Kadib markii mid ka mid ah uu noqday Christian, aabbihii ka soo horjeeda ayaa keenay hoggaamiye ka soo jeeda masaajidka si uu wiilkiisa lumay dib ugu soo noqdaan Islaamka. Laakiin markay sheekadani ujeeddadeedu tahay jacaylka riddada ah, aabihiis ayaa macallinka Qur'aanka ka soo saaray gurigiisa sababtoo ah caqabadahaasi waxay ahaayeen kuwo aan laga fikirin qoyskiisa.
In Hindu Hindisku ay la socoto nucubyadeeda badan waxaa lagu qasan yahay Islaamka qarsoodi ah sida habsami u ah qabaa'illada qabaa'ilka tuulooyinkooda u ogolaanayaan inay jimicsadaan si muuqaal ah ula dagaallamaan midba midka kale hawada. In la liqo ciddiyaha birta iyo nalalka korontada ah ee naafan kara marka la cuno waa caadi. Codadka labka ayaa laga maqli karaa marka laga yimaado dheddigga iyo sida kale.
Sufiis wuxuu isku dayayaa in uu Alle ka dhigo deganaansho oo uu ka buuxiyo joogitaankiisa. Kuwa kale xitaa waxay isku dayaan inay gashadaan Alle iyada oo loo marayo fikradoodii. Xisbiga saddexaad wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ku biiro adduunka malaa'igaha iyo jinniyada "ka danbeeya" Allah. Waxay ku xidhan yihiin heerarka sii kordhaya ee hanti-dhawrka.
Maadaama uu Alle Islaamku ka fog yahay abuurkiisa, qofna ma aha in uu ku fekero in muslimiinta sharaf leh ay isku dayaan inay masruufaan masaafadaas iyagoo adeegsanaya diimeed. Nasiib daro anti-Chrishitian jimicsiga ku shub this vacuum weyn. Tirada Sufis ee Islaamka ayaa sii kordhaya. Dalalka qaar waxay ka kooban yihiin boqolkiiba 10 ilaa 20 dadka diinta Islaamka ah oo u qaybsan kooxo kala duwan.
Qaar ka mid ah fiqiga Catholic ayaa sheeganaya in Sufisku noqon doono buundada ugu fiican ee u dhaxaysa diinta Masiixiga iyo diinta Islaamka. Si kastaba ha ahaatee, waxay diidaan xaqiiqda ah in maanka caqliga diineed ay aaminsan yihiin xaqnimadooda iyo in ay u malaynayaan in aysan u baahnayn inay toobad keenaan. Wiilka Masiixa oo iskutallaabta lagu qodbay wuxuu weli ku adkeynayaa xayawaanka. Naxariisnimadu waxay kala soocdaa badbaadadiisii, oo loo soo buuxiyey iyaga iyo sidoo kale noo.
Sufiska waxaa lagu sharxi karaa sida qoolleyaal ka dhexjiray Muslimiinta. Argagixisada Muslimiinta waxaa loogu yeeri karaa roogga iyaga ka mid ah. Waxay ka cabanayaan: "Dhammaan baryada, soonka iyo bixinta waa wax wanaagsan. Waa inaan sameynaa wax nala ah. Waa inaanu nafteena iyo dhiiggayaga u daadinnaa si aan u xakameyno ceebtii ka timid Islaamka oo aan ka ciribnno caddaalad darrada bulshada Islaamka oo leh rabshado!"
Xasan al-Banna, oo ah aasaasihii walaalkii Muslimiinta, ayaa ku baray in tukashada iyo soonku aanay ku filneyn in ay ku noolaadaan Ismaamul buuxda. Waxa uu ku adkaystay in muslimiin dhab ah ay ka adkaanayaan in uu ka soo horjeedo jahannamada illaa uu diyaar u yahay inuu dilo cadowga Islaamka. Mid ka mid ah amarada Quraanka kariimka ah ee Quraanka ayaa ugu yeera Muslimiinta in ay ka qayb qaataan dagaal hubaysan sida caddaynta rumaysadkooda addeeca.
Walaalaha Muslimiinta ah, oo ay si xun u cadaadinayaan Masaarida, waxay kala qaybiyeen in ka badan 50 argagixiso oo firfircoon. Ayatollah Khomeini oo ka tirsan kooxda Shiicada ayaa soo qaaday foornada Qowrka Quduuska ah (Jihaadka) waxayna u dirtay dagaalyahanada is-miidaaminta ee dalal kala duwan sida dilalka, sida Assassins xilligii jabhada oo dunidii ilaalinaysay.
Hisbollah, Hamaas, al-Dhihad iyo kooxo kale ayaa ku tababbaraya kuwa raacsan weerarrada aan shuruudda lahayn. Quraanku wuxuu soo celinayaa in Alle qudhiisu ku qori doono iimaanka Islaamka qalbigooda iyo in Alle xoojin doono iyaga oo u hogaansamaya caqligiisa oo kale oo leh naftiisa (Sura al-Mujadila 58:22). Tani waa aayadda keliya ee Quraanka ka hadlaysa xidhiidhka u dhexeeya Muslimiinta iyo ruuxa ka yimid Alle! Shuhadada Quduuska ah ee Quduuska ah waxaa loogu ballanqaaday meel wanaagsan oo Janno ah (Sura al-Baqara 2:154; Al Imran 3:157-158,161-171,193-195; al-Nisa 4:74; Muhammad 47:4-6;).Waxay noqon doontaa caddaalad darro in loogu yeero dagaalyahaniinta, kuwaas oo ku dhinta xeryaha is-miidaaminta, argagixisada, sababtoo ah waxay naftooda u arkayaan inay yihiin dib u bixiyayaal kuwaas oo naftooda u huray guusha Islaamka. Waxaa loo sheegay in aysan ahayn kuwa iyagu dila cadawga Islaamka, laakiin Ilaah qudhiisa. Wuxuu toogteyn doonaa toogashadooda si loo tirtiro diinta Islaamka (Sura al-Anfal 8:17).
Qaar ka mid ah suxufiyiinta iyo bini-aadminnimada ayaa ugu yeeraya kooxahan fanaaniinta ah ee kooxaha mintidiinta ah ee lumay Islaamka. Way qaldan yihiin! Alle ha u naxariistee, waa kuwa keliya ee si buuxda u fuliya Qur'aanka, oo u hoggaansana amarrada Alle wixii kharash ah (Sura al-Baqara 2:191-193, al-Anfal 8:39; al-Tawba 9:11; iwm). Muslimiinta iyo cibaadada caanka ah waxaa loo yaqaan 'fulayo' iyo khiyaamo by Quraanka. Nabada dadka aan Muslimiinta ahayn waa la xayiray, marka laga reebo xabbad-joojin haddii aysan heysan lacag iyo hub ku filan ama haddii xaalado aan wanaagsaneyn.
Maxaa dhacay 50kii sanno ee ugu dambeeyey gudaha iyo hareeraha Israel ee dagaalka aan xadka ahayn ee Muslimiintu waxay buuxin karaan tirada. Gaadiidka afduubka, bambooyinka hudheelada, taangiyada burburiya howlgallada ismiidaamiska ah iyo khatarta joogtada ah ee dagaalyahannada dareenka ayaa ah qaababka dhaqdhaqaaqa.
Markii dalxiisayaal Swiss ah la diley, la gooyey iyo haweenkoodii kufsaday meel u dhow xabaalaha boqorrada ee Luxor ayaa doonaya in ay noqdaan kuwa soo furan lahaa: "Allahu akbar!" (Alle waa ka weyn!). Isla qaylada ayaa lagu maqlay gudaha Indonesia markii dad badani ay sameeyeen kaniisado ku yaalla dabka waxayna kufsadeen gabdhaha Shiinaha. Mindanao oo ku yaala Philippines ayaa in ka badan 50,000 oo reer Chris ah ayaa la dilay intii ay socdeen dagaallo xor ah oo ay ku qaadatay mujaahidiinta laga soo bilaabo dagaalkii labaad ee dunida. Tiradaas ama in ka badan ayaa ku dhimatay waqooyiga Nigeria, sababtoo ah Masiixiyiintu ma aysan rabin inay soo gudbiyaan Sharciga Islaamka, Shareecada.
Jamhuuriyadda Federaalka ee Jarmalka 32,000 oo ka mid ah ururada Islaamiga ah ayaa helay magangelyo, sababtoo ah intooda badan waxay doonayaan dawladaha xoriyada ah ee Islaamka. Waxay si joogto ah ula socdaan sirdoonka Jarmalka. Xasuuqii, sida kii ka dhacay ciyaaraha Olombikada 1972 ee Munich, waa wax suurtogal ah waqti kasta. Quraanka Alle waxa uu caqabad ku yahay dhamaan muwaadiniinta rumaystayaasha ah inay la dagaallamaan oo ay dilaan cadowga Islaamka (Sura al-Baqqara 2:191-193; al-Nisa 4:89,91; al-Anfal 8:39; -Tawba 9:5 iwm). Yuhuudda iyo Masiixiyiinta waa in la weeraro sida ku cad Sharciga Toobaan (Sura al-Tawba 9:28-29), maxaa yeelay, iyagu ma rumaysan yihiin Ilaaha runta ah, ha raacin shareecada oo ay ka mid yihiin diinta khaldan! Islaamka, sida uu qabo Quraanka, waa ruux burbursan.
Qof kasta oo doonaya inuu injiilka Masiixiga u soo bandhigo Muslimiinta waa inuu ka gudbaa fikradda ah in Muslimiinta oo dhan ay aaminsan yihiin isla markaasna ay ka fikiraan! Qofkasta oo doonaya inuu u adeego waa inay marka hore dhagaystaan oo waydiiyaan meesha ay ka imanayaan iyo waxa ay ka fekerayaan dabeecadaha, diinta iyo mustaqbalkooda.
Qof kasta oo xikmaddiisu ka dhexayso wadahadalkaas waa inuu waydiistaa Ciise inuu u hoggaansamayo hanaankiisa si uu u helo dadka Muslimiinta ah ee qalbiyadooda ay diyaariyeen Ruuxa Ilaah. Jacaylka runta ahi wuxuu lakulmiyaa luuqada ugu fiican ee dadka oo dhan fahmaan. Isaga oo ka caawiya muwaadiniinta ajnabiga ah in ay xalliyaan dhibaatooyinkooda xukuumada isla markaas waxay ku hanuuninaysaa inay ixtiraamaan oo ay fahmaan Masiixiyiintu.
Waa inaanan ka baqaynin ruuxa Islaamka, maxaa yeelay barakada Ciise Masiix wuu ka xoog badan yahay muxumada Muhammmad. "Waa ka weyn yahay, kan kugu jiro, kan ka mid ah kuwa dunida jooga" (1 Yooxanaa 4:14) Waa in aynaan waligeed ku turunturoonin wadahadal lala yeesho Muslimiinta laakiin waa in aan isu diyaarinno. Ururada lacageed waxay diyaar u yihiin inay taageeraan kuwa doonaya inay adeegaan adeeggan iyada oo la adeegsanayo buugaag iyo koorsooyin tababareed.
Waxaad ka heli kartaa jawaabo waxtar u leh kooxaha kala duwan ee Muslimiinta Axdigii Hore, Axdiga Cusub, oo ah ilaha ugu dhow, Quraanka iyo khibradaada shakhsi ahaaneed. Sayidka wuxuu albaabka u furi karaa wadnaha muslinka ah wuxuuna ku siinayaa ereyga saxda ah qof gaar ah wakhtiga saxda ah iyada oo loo marayo hoggaanka Ruuxiisa.
2.16 -- B A A R I S
Waa kuwee saddexda diimood ee ugu waaweyn ee diinta islaamka oo saameeyay koritaanka Islaamka?
Sidee ayaa xiriirka u dhexeeya Yuhuudda iyo Masiixiyiinta ee Jasiiradda Carabta, gaar ahaan Yemen?
Maxay ereyga Quraanka kariimka ah "Dadka Kitaabka Quduuska ah" macnaheedu u yahay Muhammad?
Yuu Muxammad u tixgeliyay inuu yahay Muslimka ugu horreeya?
Muxuu Muxammad u tixgeliyey Muuse oo ma aha Masiixa, wiilkii Maryan, tusaale ahaan?
Muxuu Muxammad u sheegay in Yuhuuddu ay yihiin cadowga ugu khatarta badan ee muslimiinta? Sidee buu isaga uga adkaaday?
Midkee ka mid ah saddex kaniisadood oo caalami ah oo waawayni lahaa saameyn xooggan oo ku saabsan muuqaalka Islaamka?
Muxuu sameeyay sawirkii kaniisadda ee Ortodoksiga ee maskaxda muslimiinta iyo maxaa loogu magacaabi karaa "Kaniisadda Rabitaanka ee 1370 sanadood"?
Maxay Muslimiin badani u tixgeliyaan Kaniisadda Katoolikada inay noqoto Dagaalka Dagaalka? Sidee ayaad u sharxi kartaa dhacdooyinka taariikhiga ah?
Maxay kiniisadaha Protestant u leeyihiin gebi ahaanba aan loo baahnayn in la sameeyo qaabka diinta islaamka? Muxuu Muslimiinta u eegayaa Masiixiyiinta Kiristaanka ee leh shaki weyn?
Immisa kiniisooyin Masiixiyiin ah oo madax bannaan ayaa maanta dunida jooga, maxaase udubdhexaadka guud ee dhammaantood?
Maxay asal ahaan u kala soocaan Masiixiyiinta oo dhan diinta Islaamka?
Yaa Sunniyiinta ah iyo boqolkiiba inta Muslimiinta ah ee raacaya diinta ugu weyn ee Islaamka?
Waa kuwee Muslimiinta Shiite iyo intee le'eg ayaa raacaya caqiidooyinkooda?
Goorma ayay bilaabatay mawjadihii saddexaad ee ballaadhinta muslimiinta? Maxay tahay awoodda wadista iyo maxay tahay hadafkeedu?
Maxay Muslim kasta oo ka duwan mid kasta oo Muslimiinta ah? Sideen u fahmi karnaa qaar ka mid ah dareenkooda, fikradaha, caqiidooyinka iyo ficiladooda?
Muxuu yahay dabeecadaha gaarka ah ee mucaaradka muxaafidka ah ee maskaxda ku haya?
Sidee u la xiriiri karnaa kooxaha asaliga ah ee Muslimka ah iyo sababta?
Immisa Muslimiin ah waa mid xor ah oo noocee ahna qaab nololeedka ay raacaan?
Maxay tahay sababta xiisad aad u daran iyo xitaa dagaalo sokeeye ah oo dhex mara kooxaha xagjirka ah iyo xoriyada shareecada Islaamka?
Maxay tahay in adeegayaashu ay go'aansadaan marka ay xaqiiq tahay in badh ka mid ah Muslimiinta oo dhan ay yihiin dumar? Yaa awoodi kara inay gaaraan?
Maxay yihiin dhibaatooyinka ugu waaweyn ee dumarka ku wajahan Islaamka?
Waa maxay caqabada ay tahay in addoonku uu la kulmo marka la ogaado in kala bar dadka Muslimiinta ah ee da'doodu ka yartahay 18 sano iyo qaar ka mid ah dalalka Islaamka xitaa da'doodu ka yar tahay 16 sano?
Sidee baan u gaari karnaa dhalinyarada iyo dhalinyarada ee dunida Islaamka?
Waa maxay muhiimada ay leedahay xaqiiqda ah in boqolkiiba boqol ka mid ah Muslimiinta oo dhan ay ka careysan yihiin diintooda? Maxay yihiin sababta ugu weyn ee niyadjabka? Sidee baan u heli karnaa?
Waa maxay sababta shakhsiyadu ay uheli karaan oo ay weli u tixgeliyaan iyaga-Muslimiinta? Ma Islaamku ma ka badan yahay diin?
Maxay yihiin sababaha 10 ilaa 20 boqolkiiba dhammaan Muslimiintu waxay noqdeen Mystics? Sidee bay uga duwan yihiin Muslimiinta kale? Maxay isku dayaan inay dhistaan?
Maxay yihiin tayada wanaagsan iyo mudnaanshaha sharaf ee Islam? Maxay ka celinayaan inay aqbalaan Masiixa iyagoo badbaadiya?
Maxay argagixisada Muslimiinta ugu yeeraan "Bixiyeyaasha"? Sidee ay u sheegan karaan in ay keligood yihiin Muslimiinta dhabta ah ee daacadnimada ah?
Maxay yahiin "Bixiyeyaasha" ay filanayaan haddii ay ku dhintaan weeraro isdaba-joog ah ama weerar?
Waa maxay ujeedada guud ee buug-yarahan?
Maxay tahay inaanan ka cabsaneynin in aan Muslimiinta ku soo gaarno?
Waa maxay shanta meelood ee aan ka heli karno jawaab-celinta jawaab-celinta wadahadalka aan la yeelanay Muslimiinta?
Qof kasta oo ka mid ah kalfadhigan waxa loo oggol yahay inuu isticmaalo buug kasta oo quseeya asluubtiisa iyo inuu weydiiyo qof kasta oo aamin ah oo la yaqaan isaga / iyada marka uu ka jawaabayo su'aalahan. Waxaan sugeynaa jawaabahaaga qoran oo ay ku jiraan cinwaankaaga oo buuxa waraaqaha ama emailkaaga. Waxaan kuu baryaynaa Ciise, oo ah Rabbiga nool, inuu soo wici doono, diro, hagto, xoojiyo, ilaaliyo oo uu kula joogo maalin kasta noloshaada!
Page last modified on March 24, 2020, at 12:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.3.3)